Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka soo horjeestay xubnaha lagu kordhiyey aqalka sare!! | kowtharmedia.com
Qarax iyo Rasaas Caawa laga Maqlayo Muqdisho & Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya
Taliska Milliteriga Somalia oo Amray in Xabsiga la dhigo Qaar ka mid ah Gudoomiyaasha Degmooyinka Muqdisho (SABAB)
Home WARAR Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka soo horjeestay xubnaha lagu kordhiyey aqalka sare!!
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka soo horjeestay xubnaha lagu kordhiyey aqalka sare!!
Dec 25, 2016WARAR
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah go’aanadii ka soo baxay shirka madasha wadatashiga Qaran ee xalay lagu soo gabagabeeyay Muqdisho.
Waxaa Guddoomiyuhu sheegay in Maamul Goboleedyada loogu kordhiyay xubnaha aqalka sare min saddex xubnood Gobolka Banaadir oo ay dad badan ku noolyihiinna aan laga siin hal kursi taasoo uu sheegay iney tahay wax aan la aqbali Karin.
Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa tilmaamay in cadaalad darro weyn iyo meel ka dhac lagu sameeyay Gobolka Banaadir, waxaana uu madasha ka dalbaday inay meel ku sheegaan shacabka Gobolka Banaadir xuquuqda ay ku leeyihiin aqalka sare.
“Shacabka gobolka Banaadir waxyaabo badan oo lagu sameeyey ayey ku sabreen balse hadda dulqaadkii waa ka dhamaaday” ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir
War murtiyeed ka soo baxay shirkii Madasha wada tashiga ee lagu soo gabagabeeyay Muqdisho ayaa waxaa qodobadii ka soo baxay ka mid ahaa in 18 xubnood lagu daro xubnaha aqalka sare, lana gaarsiiyo 72 xubnood, waxaana loo qeybiyey min saddex xubnood oo loogu daray shanta maamul goboleed iyo xubnaha gobolada woqooyi.
Gobolka Banaadir ayaa bartamihii sanadkan mar hogaamiyeyaasha madashu waxay siiyeen labo xubnood oo aqalka sare ay ku yeeshaan balse waa laga laabtay ka dib markii ay soo baxeen maamul goboleedyo kale oo saluugsanaa tirada la siiyey kuwaasoo doonayey in iyana loo kordhiyo.
Post Views: 2,158
Previous PostDaawo Sawirro: Maalin Baroordiiq looga dhawaaqay Ruushka & burburka dayuuradii dhacday oo la helay!! Next PostDAAWO MUUQAAL: Quwadda Ciidan iyo Ta Dhaqaale ee Dalka Masar !!